जारा दुई टुक्रा बर्म्युडा शर्टको साथ सेट बेजिया
जारा दुई टुक्रा बरमूडा शर्टका साथ सेट गर्दछ
मारिया vazquez | 01/04/2021 18:00 | अद्यावधिक गरियो 30/03/2021 00:27 | मैले के लगाउने?
जारा क्याटलगमा नवीनताहरूलाई हेरेर, हामी नयाँ संग्रहमा दुई टुक्रा सेटहरूको प्रख्यातता देखेर छक्क भयौं। बरमूडास वा सर्टहरू मिलेर बनेको सेटहरू र अतिरिक्त पोशाक जुन प्रत्येक पोशाकमा भिन्न हुन्छ।
ज्याकेट, ब्लेजर, ब्लाउज, निहित, छोटो टोप ... माथिल्लो कपडा अनुसार शैली सेट गर्नुहोस्। अधिक आकस्मिक शैली जैकेटको साथ पूरा हुन्छ, छोटो शीर्षको साथ अधिक सारांश र ब्लेज़रसँग बढी औपचारिक। तपाईको शैली के हो? Zara प्रचलनहरूको बीचमा फेला पार्नुहोस्।
दुई-टुक्रा सेटहरू: प्रचलनहरू
दुई-टुक्रा सेटहरू बीच, ती भित्र sorbet रंग जस्तै पहेलो, गुलाबी वा हरियो। यी सामान्यतया ज्याकेट वा ब्लेजरले पूर्ण हुन्छन् र हामी उनीहरूलाई जारा क्याटलगमा भेट्न सक्दछौं छोटो देहहरू सँग जो मेल खान्छ वा सेतोमा भिन्नता हुन्छ।
जाराको क्याटलगमा पनि दुई टुक्रा सेटहरू छन् चेकर्ड वा हाउन्डस्थु प्रिन्ट। प्रिन्टहरू जुन तपाईं यसको क्लासिक संस्करणमा कालो र सेतो र अन्य अधिक र colorful्गीन र रमाइलो र ब्लूको साथ नायकको रूपमा रमाईलो फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
जारा चित्रहरूको दुई टुक्रा सेटहरूमा हामी केहि समानताहरू फेला पार्न सक्छौं। धेरै जसो उपस्थित छन् उच्च कम्मर भएको, फराकिश-लेग सर्टहरू, रफलहरू, धनु वा फ्ल्यापहरू जस्ता विवरणहरूको साथ बडिहरूमा। जूटमा मिसाइएको जुत्ताका साथ तिनीहरूलाई जोड्नुहोस् र तपाईं गर्मीको आनन्द लिन तयार हुनुहुनेछ।
ती ट्रेंडहरू हुन् तर यी प्रकारका सेटहरूमा डिजाइनका विविधताहरू विशाल हुन्छन् किनकि तपाईसँग हेर्ने समय हुन्छ। तपाईं सेतो वा इक्रु टोनमा सोर सूटबाट फेला पार्न सक्नुहुनेछ जस्तो हाम्रो कभरमा चित्रण गरिएको छ, नारंगी टोनमा क्रुशेट सेटमा रमाईलो गर्न जुनसँग तपाईंलाई ध्यान नदिन गाह्रो हुन्छ। तिनीहरूलाई Zara सूचीमा खोज्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » जारा दुई टुक्रा बरमूडा शर्टका साथ सेट गर्दछ
सुख्खा छालाको ख्याल राख्न ओल्टि .ग क्रीमहरू
सर्वश्रेष्ठ महिलाको अत्तर